Imigomo nemeko - EasyBiz | I-Mileage Tracker App
Kugqityiwe ngokutsha: Kwangathi i-25, i-2019
Nceda ufunde le Miqathango neMibandela ("Imigaqo", "Imigomo neemeko") ngokucophelela ngaphambi kokusebenzisa i-EasyBiz Mileage Tracker yesicelo seselula ("iNkonzo") esebenzayo yi-EasyBiz Mileage Tracker ("us", "thina", okanye "yethu" ).
Ukufikeleleka kwakho nokusetyenziswa kweNkonzo kunqunywe xa ukwamkelwa kunye nokuthotyelwa kwale Migqaliselo. Le Miqathango isebenza kubo bonke abatyeleli, abasebenzisi kunye nabanye abafisa ukufikelela okanye basebenzise iNkonzo.
Ngokufikelela okanye ukusebenzisa iNkonzo uyavuma ukuba ubophelelwe yiMigqaliselo. Ukuba awuvumelani naliphi na inxenye yemigqaliselo ngoko awukho imvume yokufikelela kwiNkonzo.
Ezinye iindawo zeNkonzo zihlawulwa ngokubhaliselwe ("Ukubhaliselwa (s)"). Uya kuhlawulwa kwangaphambili kwixesha eliphindaphindiweyo kunye nexesha eliqhelekileyo ("Umjikelo Wokuhlawula"). Imijikelezo yokuhlawula iisetyenziswe rhoqo ngenyanga.
Ekupheleni kweSikhuphelo ngasinye sokuYilwayo, ukuBhaliswa kwakho kuya kuhlaziywa ngokuzenzekelayo phantsi kweemeko ezifanayo ngaphandle kokuba uyikhansele okanye i-EasyBiz Mileage Tracker iyayikhansela. Ungakhansela ukuhlaziywa kwakho kokubhaliselwa mhlawumbi ngephepha lakho lokuphatha i-akhawunti okanye ngokuqhagamshelana neqela le-EasyBiz Mileage Tracker.
Indlela efanelekileyo yokuhlawula, kuquka nekhadi lekhredithi, iyadingeka ukucwangcisa intlawulo yoBhaliso lwakho. Uya kunika i-EasyBiz Mileage Tracker ngolwazi oluchanekileyo nolugqibeleleyo lwenkcazelo kuquka igama elipheleleyo, idilesi, urhulumente, ikhowudi yeefowuni, inombolo yefowuni kunye nolwazi oluchanekileyo lwenkokhelo. Ngokungenisa ulwazi olunjalo lokuhlawula, ngokuzenzekelayo ugunyaze i-EasyBiz Mileage Tracker ukuhlawula zonke iindleko zokubhaliselwa ezenziwa nge-akhawunti yakho nakwezo zixhobo zokuhlawula.
Ukuba ukuhlawula okuzenzekelayo kungaphumeleli ngenxa yezizathu, i-EasyBiz Mileage Tracker iya kukhupha i-facsi ekhompyutheni ebonisa ukuba kufuneka uqhube ngesandla, ngexesha lomhla othile wokugqibela, ngentlawulo epheleleyo ehambelana nexesha lokuhlawula njengoko kuboniswe kwi-invoyisi.
I-EasyBiz Mileage Tracker, ngokwengqiqo yayo yodwa kunye nangaliphi na ixesha, iyakwazi ukuguqula iirhafu zokubhaliselwa kweeNgxelo. Naluphi na utshintsho lomrhumo wokubhaliselwa luya kusebenza ekupheleni kwexesha lokugqibela lokuhlawula.
I-EasyBiz Mileage Tracker iya kunika isaziso esilungileyo phambi kwayo nayiphi na inguqu kwiimali zokubhaliselwa ukukunika ithuba lokuphelisa ukubhaliswa kwakho ngaphambi kokuba olo tshintsho luphumelele.
Ukusetyenziswa kwakho okuqhubekayo kweNkonzo emva kokuba utshintsho lwemali yokubhalisa luqala ukusebenza sisivumelwano sakho sokuhlawula umrhumo werhafu yokubhaliselwa.
Izicelo ezithile zokubuyiselwa kweziBhaliso zingaqwalaselwa yi-EasyBiz Mileage Tracker kwimeko yeemeko kwaye zinikezelwe ngengqiqo yodwa ye-EasyBiz Mileage Tracker.
Xa udala i-akhawunti kunye nathi, uqinisekisa ukuba ungaphezulu kwexesha le-18, kwaye ukuba ulwazi olusinika lona luchanekile, luzalisekile kwaye lukhoyo ngamaxesha onke. Ulwazi oluchanekileyo, olungaphelelanga, okanye olungapheliyo lungakhokelela ekupheleni kweakhawunti yakho kwiNkonzo.
Unoxanduva lokugcina imfihlo ye-akhawunti yakho kunye nephasiwedi, kubandakanywa kodwa kungaphelelwanga kumda wokufikelela kwikhompyutheni yakho kunye / okanye i-akhawunti. Uyavuma ukwamukela uxanduva malunga naliphi na imisebenzi okanye izenzo ezenzeka phantsi kwe-akhawunti yakho kunye / okanye iphasiwedi, ingaba iphasiwedi yakho ineNkonzo yethu okanye inkonzo yesithathu. Kufuneka usitshele ngokukhawuleza xa uqaphela ukuphulwa kokukhuselwa okanye ukusetyenziswa okungagunyazisiweyo kweakhawunti yakho.
Awukwazi ukusebenzisa njengegama lomsebenzisi igama lomnye umntu okanye iqumrhu okanye elingenalo ngokusemthethweni ukusetyenziswa, igama okanye uphawu lokuthengisa elingaphantsi kwamalungelo omnye umntu okanye ibhizinisi ngaphandle kwakho, ngaphandle kokugunyaziswa okufanelekileyo. Awukwazi ukusebenzisa njengegama lomsebenzisi nawuphi na igama elihlambalazayo, elibi okanye elihlambalayo.
Inkonzo kunye nomxholo wayo wokuqala, iimpawu kunye nokusebenza kwaye ziza kuhlala ziyimpahla ekhethekileyo ye-EasyBiz Mileage Tracker kunye nabalayisenisi bayo. Inkonzo ikhuselwe yi-copyright, uphawu lokuthengisa kunye neminye imithetho ye-United States nakwamanye amazwe. Iimpawu zethu zokuthengisa kunye neengubo zokurhweba asinakusetyenziswa malunga naluphi na umkhiqizo okanye inkonzo ngaphandle kwemvume ebhaliweyo ye-EasyBiz Mileage Tracker.
Inkonzo yethu inokuthi iqulethe iikhonkco kwiindawo zewebhu zentlalo okanye iinkonzo ezingekho phantsi okanye ezilawulwe yi-EasyBiz Mileage Tracker
I-EasyBiz Mileage Tracker ayinakho ukulawula, kwaye ayinakuthatha uxanduva lomxholo, imigaqo-nkqubo yobumfihlo, okanye iinkqubo zaso nasiphi na isayithi okanye ezinye iinkonzo zewebhu. Asikuvumeli ukunikezelwa kwanoma yiyiphi yale mibutho / abantu ngabanye okanye iiwebhusayithi zabo.
Uyavuma kwaye uyavuma ukuba i-EasyBiz Mileage Tracker ayiyi kuba nexanduva okanye ihlawulwe ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo, nangona yimuphi umonakalo okanye ukulahleka okubangelwayo okanye kubangelwe ukuba kubangelwe okanye malunga nokusetyenziswa okanye ukuthembela kuyo nayiphi na into enjalo, iimpahla okanye iinkonzo ezikhoyo okanye ngokusebenzisa nawaphi na amawebhu okanye iiNkonzo zewebhu.
Sikucebisa kakhulu ukuba ufunde imigqaliselo kunye neemeko kunye nemigaqo-nkqubo yobumfihlo yeso nasiphi na isayithi zewebhu okanye iinkonzo ozivakatyelayo.
Uyavuma ukukhusela, ukuhlawulela kwaye ubambe i-EasyBiz Mileage Tracker engenaziphumo kunye nelayisenisi yayo kunye nabalayisenisi, kunye nabasebenzi babo, iikontraka, ama-agent, amagosa kunye nabaqondisi, ukusuka kunye nokuchasene naziphi na zonke izibango, umonakalo, uxanduva, ilahleko, amatyala, iindleko okanye ityala, kunye neendleko (kubandakanywa kodwa kungagqithwanga kwiimali zegqwetha), ezibangelwa okanye ezivela kuyo) ukusetyenziswa kwakho kunye nokufikelela kweNkonzo, ngawe okanye nawuphi na umntu usebenzisa i-akhawunti yakho kunye nephasiwedi, okanye b) ukuphulwa kweMigqaliselo.
Akukho mcimbi u-EasyBiz Mileage Tracker, okanye abalawuli bawo, abasebenzi, amaqabane, amanxusa, abaxhasi, okanye abambisene nabo, banokubakho uxanduva nangona nayiphi na imali engabonakaliyo, engafanelekileyo, ekhethekileyo, efanelekileyo okanye ehlawulisayo, kuquka ngaphandle kokunciphisa, ukulahleka kweenzuzo, idatha, ukukholiswa, okanye ezinye ilahleko ezingabonakaliyo, ezibangelwa (i) ukufikelela kwakho okanye ukusebenzisa okanye ukungakwazi ukufikelela okanye ukusebenzisa iNkonzo; (ii) nayiphi na indlela yokuziphatha okanye umxholo woluphi na umntu wesithathu kwiNkonzo; (iii) nayiphi na into enokufumaneka kwiNkonzo; kunye (iv) nokufikelela okungagunyaziswanga, ukusetyenziswa okanye ukuguqulwa kokudluliselwa kwakho okanye umxholo, nokuba kusekelwe kwiwaranti, isivumelwano, ukungahambi (kuquka ukunganakwa) okanye nayiphina imfundiso yezomthetho, nokuba ngaba siye saziswa malunga nokulimala okunjalo, kwaye ukuba impendulo echazwe apha ifumaneka ukuba ayiphumeleli injongo yayo ebalulekileyo.
Ukusetyenziswa kwakho kweNkonzo kusemngciphekweni wodwa. Inkonzo inikezwa nge "AS IS" kwaye "NJENGOKUBALULEKILE" isiseko. Inkonzo inikezwa ngaphandle kwemigangatho yanoma yiluphi uhlobo, nokuba luvakalisa okanye luphazamisekile, kubandakanywa, kodwa alukhawulelwanga, luchaza iziqinisekiso zokuthengisa, ukufaneleka kwinjongo ethile, ukungaphuli okanye inkqubo yokusebenza.
I-EasyBiz Mileage Tracker i-subsidiaries zayo, abadibeneyo kunye nabalayisenisi bayo abavumelani ukuba a) iNkonzo iya kusebenza ingaphazamiseki, ikhuselekile okanye ifumaneke kwixesha okanye kwindawo ethile; b) naziphi na iimpazamo okanye iziphene ziya kulungiswa; c) iNkonzo ikhululekile kwiintsholongwane okanye ezinye izinto eziyingozi; okanye d) iziphumo zokusebenzisa iNkonzo ziya kuhlangabezana neemfuno zakho.
Ezinye izigunyazo azivumeli ukukhutshwa kwemigangatho ethile yemigangatho okanye ukukhutshwa okanye ukunciphisa umthwalo wemfanelo ngenxa yempembelelo echaphazelekayo okanye engafanelekanga, ngoko ukunciphisa ngaphezulu kungasetyenziswa kuwe.
La magama aya kulawulwa kwaye alawulwe ngokuhambelana nemithetho yaseColorado, eUnited States, ngaphandle kokungqubana kwemibandela yomthetho.
Ukungaphumeleli kwethu ukunyanzelisa nayiphi na ilungelo okanye ilungiselelo leMigangatho ayiyi kuthatyathwa njengento yokukhutshwa kwamalungelo. Ukuba nayiphi na ilungiselelo leMigqaliselo ibanjwe ingavumelekanga okanye inganyanzelwanga yinkantolo, imimiselo ekhoyo yale Migaqo iya kuhlala isasebenza. La maGatya aquka isivumelwano sonke phakathi kwethu ngeNkonzo yethu, kwaye sinqamle kwaye sitshintshe izivumelwano eziphambili esingaba nazo phakathi kwethu malunga neNkonzo.
Sigcina ilungelo, kwinqaba yethu yodwa, ukuguqula okanye ukubuyisela iMigqaliselo nanini na. Ukuba ukuhlaziywa ngumbandela siza kunika isaziso seentsuku ze-30 phambi kweyiphi na imiqathango emitsha isebenza. Yintoni eyenza utshintsho lwempahla luya kugqitywa kwiqondo lethu kuphela.
Ngokuqhubeka nokufikelela okanye ukusebenzisa iNkonzo yethu emva kokuba naluphi na uhlaziyo olusebenzayo, uyavuma ukuba ubophelelwe yimigaqo ehlaziyiweyo. Ukuba awuvumelani nemimiselo emitsha, awuvumelekanga ukusebenzisa iNkonzo.